मन्त्रीको विदेश भ्रमण मोह : मन्त्रालयका काम प्रभावित - Pardeshi Khabar
काठमाडौं, २ कात्तिक । मितव्ययिता, सुशासन, स्वच्छताको अभियानमा जुटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री विदेश भ्रमणमा रमाउन थालेका छन् । धेरै मन्त्री एकैपटक विदेश जाँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यसमेत प्रभावित भइरहेका छन् ।
यतिबेला पाँच मन्त्री, दुई मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू विदेश भ्रमणमा रहेका छन् । मन्त्रीकै विदेश भ्रमणले मितव्ययिता, सुशासन, स्वच्छता कायम गर्ने अभियानमा जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभियानसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
विश्व सैन्य खेलकुद प्रतियोगितमा शुक्रबार सहभागी भएर पोखरेल आइतबार र सोमबार बेइजिङमा हुने अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पदमा अर्याल पनि चीन भ्रमणमै रहेकी छन् । नेकपा नेतृ पम्पा भुसालसँगै मन्त्री अर्याल बेईजिङमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि चीन गएकी हुन् ।
यस्तै, छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि चीनमै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल चीनको चेन्दुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन नेकपा नेतृ एवं मुख्यमन्त्री पोखरेलकी धर्मपत्नी सुजिता शाक्यसहित त्यसतर्फ गएका हुन् । बीआरआईको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी २७ असोजमा त्यसतर्फ लागेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँगै मुख्यमन्त्री शाही चीन पुगेका हुन् । यद्यपि, मन्त्री महासेठ बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन् भने मुख्यमन्त्री शाही अझै चीनमै अन्य कार्यक्रका लागि रहेका छन् । शाही आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । उनी दुई दिन अझै चीनमा रहनेछन् ।
२८ असोजमा अमेरिका प्रस्थान गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंक र मुद्राकोषको कार्यक्रम सहभागी छन् । त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी ६ कात्तिकमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै अर्का मन्त्री पनि म्यान्मारमा छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली म्यान्मारको कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ भने राष्ट्रपति उतैबाट जापान जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी जापानमा नयाँ सम्राटको राज्याभिषेक कार्यक्रम सहभागी हुन ३ कात्तिकमा म्यान्मारबाट जापानतर्फ जाने र ६ कात्तिकमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फर्किएसँगै ७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओली अजरबैजान जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि जानेछन् । अजरबैजानको राजधानी वाँकुमा ८ र ९ कात्तिकमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर ओली नेतृत्वको टोली ११ कात्तिकमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री मात्रै नभई सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू पनि चीन भ्रमणमा रहेका छन् । छुट्टाछुट्टै गरी नेकपाको दुई टोली अहिले चीनमा रहेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू डा. बेदुराम भुसाल, देवेन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजाल चीन गएका छन् । चीनको गोन्जाओ पुगेका उनीहरू चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए । २७ असोजमा उनीहरूसहित सात देशका नेताहरू सो कार्यक्रममा सहभागी भएको बताइएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएको केही दिनमै उनीहरू चीन पुगेका हुन् । त्यसअघि काठमाडौंमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को संयुक्त आयोजना एक कार्यक्रम हुनुका साथै दुई कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा आपसी सदभाव, अनुभव अदानप्रदानलगायतका सहमती भएको थियो ।
यस्तै, नेकपाका अर्का नेता सुरेश आले मगर पनि चीन भ्रमणमै रहेका छन् । तिब्बतको कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेर आले मगरको टोली उता गएको हो । केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययिता, सुशासन, स्वच्छता कायम गर्न भन्दै कर्मचारीलाई अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाएका थिए । तर, यही सरकारका मन्त्री एकपछि अर्को गरी विदेश भ्रमणमा जान थाले पनि प्रधानमन्त्रीले रोक्ने प्रयास गरेका छैनन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
« नेपाल स्काउटको जग्गा निजी कम्पनीको कब्जामा : पदाधिकारीकै संलग्नतामा १६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण (Previous News)
(Next News) अनुदानबाट डेढ लाख भूकम्पपीडित फेरि हट्दै »